कसरी बन्छ हामीले खाने नुन ? – ramechhapkhabar.com
तपाईं हामीले दैनिक रुपमा दाल, तरकारी र अचारमा प्रयोग गर्ने नुन कसरी प्राप्त हुन्छ होला ? कतिपयले त नुन महासागरबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी राख्नुहोला । यद्यपि कतिलाई त यो कुराको जानकारी नहुन पनि सक्छ ।
चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले केही समयअघि चीनको लियानयुङयाङ शहरको समुद्री किनारामा नुन निकालेर त्यसलाई धुल्याउँदै गरेको तस्वीर प्रकाशन गरेको थियो । तस्वीरमा समुन्द्रबाट संकलन गरेर ल्याएको नुनलाई चिनियाँ कामदारहरुले तह लगाइरहेको देख्न सकिन्छ ।
तस्वीरमा एक मजदुरले संकलित नुनका ठुलाठुला ढिकाहरुलाई डोजरले धुल्याइरहेको समेत देख्न सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सोडियमको मात्रा घटाउने सल्लाह दिएको छ । सन् २०१३ मा प्रकाशित नयाँ निर्देशिकाले दुई हजार एमजी वा पाँच ग्रामभन्दा कम नुन खान हुने बताएको छ । यो भनेको जम्मा एक चम्चा नुन हो ।